Isebenza njani iFundisa?
Uyakufumana ibhonasi nyaka ngamnye njengebhaso lokugcinela imfundo yomntwana imali. Isixa sebhonasi singayakufikelela kwi-25% (kotanganye) yemali oyigcina ngonyaka ngamnye, ukuyakutsho kwi-R600 kumntwana ngamnye.
Oku kuthetha ukuba xa ugcina i-R100 ngenyanga kangangonyaka (i-R1200 ngonyaka), uyakufumana i bhonasi-eyi R300 ngonyaka yokuhlawulela imfundo yomntwana wakho.
Akukho mlinganiselo kwinani labatyalimali abanokugcinela umfundi omnye. Nakuba kunjalo, ibhonasi eyakunikwa umfundi nyaka ngamnye ayiyikudlula kwi-R600 nokuba bangaphi abatyalimali.
Ukuze ufumane ibhonasi ephezulu ye-R600, umtyalimali kuyakufuneka agcine i-R2400 iyonke kuloonyaka.
Urhulumente kunye neenkampani zee-unit trust ziye zavuma ukuxhasa iprojekthi yolingelo yeminyaka emi-3 ukuze zibone ukuba kuyimfuneko kusini na ukugcinela imfundo yabantwana benu. Ibhonasi inikwa umtyalimali ofike kuqala. Abokuqala ukugcina imali nge-akhawunti yeFundisa Fund, iya kubangabokuqala ukufumana ibhaso, ekubeni uvimba webhonasi weprojekthi yolingelo ulinganiselwe.
Imali yebhonasi asiyoyakho – inokusetyenziswa kuphela ngumfundi omgcinela imfundo yakhe.
Ukuba ufuna ukukhupha imali yakho kwi-akhawunti yakho yeFundisa Fund unako, kodwa uyakulahlekelwa yi-25% eyibhonasi obunokuyifumana.. Kuyakuthabatha iintsuku ezimbini zomsebenzi ukuze ufumane imali yakho kwinkampani yee-unit trust okanye ibhanki ovule kuyo i-akhawunti yakho yeFundisa Fund, ukuba uthatha imali yakho.
Ukuba umfundi ukhetha ukungaqhubekeki nemfundo, uyakulahlekelwa yimali yebhonasi ngaphandle kokuba ukhetha omnye umfundi oyakuthabatha indawo yakhe.
Ukuba ibhonasi ayisetyenziselwanga ukuhlawula izifundo zomfundi uyakulahlekelwa yiyo.
Ngo-2007 uRhulumente kunye neenkampani ezingamalungu e-ASISA bavumelana ngokuxhasa iprojek thi elingwayo yeminyaka emi-3 ukuhlola ukuba ingaba abazali kunye nabagcini bafuna ukulondolozela imfundo ephakamileyo yabantwana babo imali na. Kulandela impumelelo yeprojek thi yolingo, abantu ekusetyenziswana nabo kwiphulo eli, abo iliSebe leMfundo ePhakamileyo noQeqesho, iSikim seSizwe esiNceda abaFundi ngeziMali (Student Financial Aid Scheme) (NSFAS) kunye noMbutho woLondolozo noTyalo-mali eMzantsi Afrika (Association for Savings and Investment in South Africa) (ASISA) bavumile ukuthatha eli phulo lolondolozo balise kwinqanaba elilandelayo kwaye bazise isigaba sesibini seFundisa ngowoku-1 Matshi 2013.
Ukusukela ngowoku-1 Matshi 2013 uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na lwengeniso yomzi wakho yonyaka eli-R180 000 okanye ngaphantsi, luza kusebenza kwiintsapho zabo bonke abafundi abafuna ukuvula i-akhawunti ye-Fundisa Fund.
Ukuba ngaba umtyali-mali akazalani nomfundi, uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na ngekhe lusebenze kumtyali-mali; lusebenza kuphela kusapho lomfundi. Nabani na ke unokwenza utyalo-mali egameni lomfundi, ukuba nje umfundi uvela kusapho olurhola ngaphantsi kwe-R180 000 ngonyaka.
Abantu abarhola imali eninzi bayakhuthazwa ukuba benze utyalo-mali egameni labantwana abavela kwezo ntsapho zinengeniso esezantsi ngoko ke uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na alusebenzi kubatyali-mali. Ingxowa-mali ikwayilelwe ukunceda abaqeshi abangathanda ukunika iFundisa njengebhenefithi abasebenzi abawela kuvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na.
I-akhawunti yomtyali-mali iya kufumana ibhonasi nyaka ngamnye njengebhaso lokugcinela imfundo yomntwana imali. Isixa sebhonasi singayakufikelela kwi-25% (ikota e nye) yemali oyigcina ngonyaka ngamnye, ukuyakutsho kwi-R600 kumntwana ngamnye.
Oku kuthetha ukuba xa ugcina i-R100 ngenyanga kangangonyaka (i-R1200 ngonyaka), uya kufumana i bhonasi-eyi R300 ngonyaka yokuhlawulela imfundo yomntwana wakho.
Ibhonasi ayiqinisekiswanga kwaye yabelwa abatyali- mali ngokokuba ‘ofike kuqala, nguye owokuqala ukufumana umvuzo’. Ukuba nje imali isekhona yebhonasi ibhonasi iya kwabelwa kulondolozo lwabafudi abaphumelele uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na. Ibhonasi ixhaswa ngemirhumo evela kuRhulumente kunye necandelo labucala kwaye zombini iSebe leMfundo ePhakamileyo noQeqesho ne-ASISA zisahleli zizibophelele kwiFundisa.
Uvavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na aluyikusebenza kwiintsapho zabafundi abavule iikhawunti zeFundisa phambi kowoku-1 Matshi 2013. Iintlawulo zebhonasi yonyaka ziya kuqhuba zisenziwa kwaba batyali-mali. Zonke iintlawulo zebhonasi kwaba batyali-mali ziya kuzalisekiswa ukuba umfundi ubhalise kwiziko lemfundo lamabakala aphezulu likarhulumente xa kufika ixesha lokuba umfundi abhalisele imfundo ephezulu. Iintlawulo zebhonasi kwaba bafundi abo iintsaph o zabo ziwela ngaphandle kovavanyo lwendlela yokumisela ukuba ufanelekile na ziya kuxhaswa ngemali yebhonasi evela kumalungu e-ASISA.
Akukho mlinganiselo kwinani labatyali-mali abanokugcinela umfundi omnye. Nakuba kunjalo, ibhonasi eya kunikwa umfundi nyaka ngamnye ayiyikudlula kwi-R600 nokuba bangaphi abatyali-mali.
Ukuze ufumane ibhonasi ephezulu ye-R600, umtyali-mali kuya kufuneka agcine i-R2400 iyonke kuloo nyaka.
Imali yebhonasi ayiyoyomtyali-mali – inokusetyenziswa kuphela ngumfundi omfundo i londolozelwa imali ngumtyali-mali.
Ukuba ufuna ukukhupha imali yakho kwi-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund unako, kodwa uya kulahlekelwa yi-25% eyibhonasi obunokuyifumana.. Kuya kuthabatha iintsuku ezimbini zomsebenzi ukuze ufumane imali yakho kwinkampani yee-unit trust okanye ibhanki ovule kuyo i-akhawunti yakho ye-Fundisa Fund, ukuba uthatha imali yakho.
Ukuba umfundi ukhetha ukungaqhubekeki nemfundo, uya kulahlekelwa yimali yebhonasi ngaphandle kokuba ukhetha omnye umfundi oya kuthabatha indawo yakhe.
Ukuba ibhonasi ayisetyenziselwanga ukuhlawula izifundo zomfundi uya kulahlekelwa yiyo.